Today Nepal News – nepalnews
Today Nepal News
सुपारी ‘काँचो’ बोलको गीत रिलिज।
आर रोशफी फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘नेप्टे’को लोक लयमा आधारित पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । रोहित रुम्बाको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको यो चलचित्रको ‘सुपारी ‘काँचो’ बोलको गीत रिलिज भएको हो । चैत्र ३० गतेबाट यो चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो गीतमा ओम सुनार र सावित्री जोशीको स्वर, ओम सुनारको संगीत, भानुभक्त ढकालको शब्द... Continue Reading →
Order of Supreme Court not to spend the amount of development funds.nepal
Kathmandu, December 30 The Supreme Court has ordered not to spend the amount of Election Area Infrastructure Program and Election Area Development Fund in the recommendation of former MPs. After the election, the government had circulated to spend the money in the recommendation of members of the dissolved parliament. This would cost around 10 billion... Continue Reading →
अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा डा. गोविन्द केसीसँग बयान लिएको सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि त्यस प्रकरणमा बहस हुने भएको छ। अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीद्वारा सोमबार गिरफ्तार भएपछि पनि भोक हडताल जारी राखेका डा. केसीलाई बयानपछि वीर अस्पतालभित्र 'सुरक्षा नियन्त्रण'मा राखिएको छ। तीव्र प्रतिक्रिया जन्माइदिएको डा. केसीको गिरफ्तारीको भोलिपल्ट अदालतमा उनको बयान पूरा भएको छ। 'अदालतप्रति सम्मान' उनले अदालतको... Continue Reading →
थारु गीत ‘कपाल ठाडो’ बोलको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
माघे सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर अष्ट्रेलियाबाट गायक समीर आचार्यको स्वरमा रहेको थारु गीत 'कपाल ठाडो' बोलको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अष्ट्रेलियाबाटै नेपाली गीत-संगीतमा सशक्त रुपमा लागी परेका समीरले यो पटक ख्यातीप्राप्त डान्स ग्रुप भीमफेदी गाइजसँग सहकार्य गरेर भिडियो तयार गरेका छन् । यो गीतमा आशिष अविरलको संगीत छ भने एक नारायण भण्डारीको शब्द रचना रहेको... Continue Reading →
तस्वीर कपीराइटREUTERS उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूबीच भएको वार्तापछि उत्तर कोरियाले आफ्ना प्रतिनिधिहरू फेब्रअरीमा हुने शीतकालीन ओलिम्पिक्सका लागि पठाउने भएको छ। उत्तर कोरियाले पठाउने टोलीमा खेलाडी र समर्थकका साथै अन्य हुनेछन्। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूबीच दुई वर्षयता पहिलोपटक उच्चस्तरीय वार्ता भएपछि यो घोषणा भएको हो। उनीहरू दुई देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पर्ने पाम्मून्जम्... Continue Reading →
दुई आयोगका कानूनमा परिमार्जन नगरिने।
संक्रमणकालीन न्याय दिन गठित दुईवटा आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्यमान कानूनमा चाहिँ हाललाई कुनै परिमार्जन नगरिने बताएको छ। तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका आयोग पदाधिकारीहरूले चाहिँ कानूनी सुधारसहित म्याद थप्नुपर्ने माग गर्दे आएका छन्। कतिपय नागरिक अधिकारकर्मीले पनि विद्यमान स्वरूपमा दुई आयोगले औचित्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै तिनीहरूलाई भङ्ग गरी नयाँ... Continue Reading →
प्रमुख चिप दोषहरूले अरबौं यन्त्रहरूमा असर।
यसमा जानुहोस् ... प्रश्नब्याकस्रोतहरू (सेलेना लार्सन, सीएनएन मनी) - कम्प्यूटर चिप्समा दुई प्रमुख दोषहरू सुरक्षा चिन्ताको लागी बिभिन्न कम्प्यूटर र स्मार्टफोनहरू छोड्न सक्दछन्, शोधकर्ताहरूले बुधवार बताइन्। र एक अमेरिकी सरकारद्वारा समर्थित शरीरले चेताउनी समस्यालाई पूर्णतया सुधार गर्न को लागी स्वयं चिप्स गर्न आवश्यक छ। दोषहरूले आक्रमणकर्ता मेमोरीमा भण्डार गरिएको संवेदनशील डेटा पढ्न अनुमति दिन्छ, जस्तै... Continue Reading →
जलिरहेको पानीजहाज विस्फोट हुने खतरा।
तस्वीर कपीराइटREUTERS पूर्वी चीन सागरमा एउटा मालवाहक पानीजहाजसँग इन्धन बोकेको एउटा विशाल पानीजहाज ठोक्किएको दुई दिन पुग्दा तेलको चुहावटका कारण वातावरणीय विपद् निम्तिएको आशंका बढ्दै गएको छ। झण्डै १० लाख ब्यारल तेल लिएर सान्ची नामक उक्त इरानी पानीजहाज दक्षिण कोरियातर्फ गइरहेको थियो। चालक दलका सदस्यसहित ३२ जनाको खोजी कार्य खराब मौसम र कालो धुवाँको मुस्लोका... Continue Reading →
चीनको पूर्वी समुद्रमा दुर्घटना: ‘३२ जना बेपत्ता’
तस्वीर कपीराइटAFP तेल बोकेको पानीजहाज र मालसामानसहितको 'कार्गो' पानीजहाज चीनको पूर्वी समुद्री तटपारी आपसमा ठोक्किँदा ३२ जना हराइरहेका छन्। पानामामा दर्ता 'द सान्ची' नामक पानीजहाजले इरानबाट १ लाख ३६ हजार टन इन्धन ल्याएको थियो। दुर्घटनामा परेको पानीजहाज इरानबाट दक्षिण कोरिया जान लागेको बताइएको छ। दुर्घटनापछि आगो लागेको छ। उद्धार चीनको यातायात मन्त्रालयले हराइरहेका मानिसहरु उक्त... Continue Reading →